EX - ABSDF: April 2013
ဒီနေ့ပဲ့ ၂၄ - ၁- ၂၀၀၀ တုန်းက God Army ရတ်ခ်ျဘူရီ ဆေးရုံကိုဝင်စီးသောနေ့...အခုဆို (၁၃)နှစ် တိတိပြည့်ပြီ...ဂျော်နီ(ခ)ဗေဒါ ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကျောင်းသားတပ် (ABSDF) ဟောင်း ၅ ဦး.. ဘန်ကောက်မြန်မာသံရုံးကို ဝင်စီးပြီး စစ်အစိုးရအပေါ်ဖိအားပေးခဲ့တယ်.. Read more »
UWSA ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆုံလည်ပစ်လို့ရတဲ့
လက်နက်တပ်ဆင်ထားတဲ့ ရဟတ်ယာဉ်များကို ရရှိခဲ့ကြောင်း ဧပြီ ၂၉ ထုတ် Janes Intelligence သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ Read more »
အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေမှာ အာဏာရှင်တွေဟာ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ တစ်ဦးတည်း အာဏာကိုဆုပ်ကိုင်သူနဲ့ တစ်ပါတီတည်းမှာပဲ ဦးဆောင်သူပြောင်းလဲသွားတဲ့ အာဏာရှင်ပုံစံမျိုး တွေ ရလေ့ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်း မှာ ဘယ်အာဏာရှင်မျိုးမှ အာဏာကို လွယ်လင့်တကူ စွန့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။ Read more »
ကျနော် မမေ့တဲ့ လေထီးဗိုလ်အုန်းမောင် (ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း) ဦးလေး
ဗိုလ်အုန်းမောင်ကို ကျနော် ၉-၁၀ နှစ်သားအရွယ်တုန်းက ရန်ကုန်ထောင်ကြီးထဲမှာ
ပတမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် တွေ့ဖူးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ကျနော် ရေးပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျနော့်အဖေ ထောင်ကျနေစဉ်တုန်းက ကျနော်အဖေ့ကို သွားတွေ့တော့ ထောင်ပိုင်တို့က
ကျနော့်ကို မနက်ကနေ ညနေအထိ ထောင်ထဲရှိ အဖေနေတဲ့ (၅) တိုက်အထဲအထိ သွားလည်ခွင့်၊ အဖေနဲ့အတူ နေခွင့်ပေးတာပါ ။ Read more »
ဒေါ်စု မွန်ဂိုလီးယားရောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွန်ဂိုလီယားနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွါ (ရုပ်/သံ)
EU သမဂ္ဂမှ ပိတ်ဆို့မှုတွေရုတ်သိမ်းပေးခြင်းအ﻿ပေါ် ကျနော့်အမြင်
by Ko Balai Aung Soe (Notes) on Saturday, April 27, 2013 at 7:54am
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာ အဖွဲ့ဝင် ၂၇ နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ EU ဥရောပသမဂ္ဂက မြန်မာနိူင်ငံအပေါ်လက်နက်အရောင်းအ၀ယ်ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွအားလုံး EU ဥရောပသမဂ္ဂက ရုတ်သိမ်းပေးလိုက်ခြင်းအပေါ် လက်ရှိသွားနေတဲ့ နိူင်ငံရေးအခြေနေနှင့် အနေအထားအရ လက်မခံသေးချင်သော်ညားလည်း လက်ခံပေးကြရမည်ဖြစ်သည်ဟု ကျနော့်အနေနဲ့ သုံးသပ်မိပါသည်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ စီးပွားရေး အခြေအနေတွေ တိုးတက် ကောင်းမွန်မလာခြင်းမှာ ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိမလဲ။ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ဖို့ ပြင်နေချိန်မှာ အဆင်သင့်ဖြစ်မနေရခြင်းဟာ ဘယ်သူတွေကြောင့်လဲ၊အမှားလုပ်တဲ့သူတွေက
သူတို့မှားတာကို လူဦးရေ သန်း ၆၀ ကို အကြောင်းပြပြီး ဆက်လုပ်မှာကိုတော့ မလိုလားပါဘူး။
့ဆိုတာ အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ သယ်ရင်းတို့ ခေါင်းဆောင်အရွေးမမှားရအောင် ကျွန်တော်တင်ပြပေးပါရစေ............ “ဂဏန်း၊ ပုတ်သင်၊ ၀ါးပင် ၊ နွားသိုး၊ လိပ်မျိုး၊ ခွေးအ၊ ဤခြောက်ဝ နာယက မတင်ထိုက်။”
(ဘမောင်ညို) ဒီကနေ့ ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့ကတော့ ကံထူးတဲ့နေ့ ပါပဲခင်ဗျား။ ရပ်ကွက်ရုံးမှာ မဲနှိုက်လိုက်တာ ကျွန်တော်
ဖုန်းမဲပေါက်ကြောင်း အိမ်က ရုံးကို လမ်းဘေးဖုန်းနဲ့ ဆက်လာပါတယ်။ လူ ၆၀၀ မှာ ဖုန်းအလုံး ၁၀၀ ပေးတာဆိုတော့ ခြောက်ယောက်မှာ တစ်ယောက်ကံထူးသူပေါ့။ Read more »
တည်ငြိမ်မှု့ ရင်ဘတ်စည်တီး ငိုကြီးချက်မ၍ ယူကျုံးမရ အပူလုံးကြွသူ မတွေ့ရ ။ သောကကို တည်ငြိမ်စွာ ဖြေဖျောက် နိုင်ကြသည် ။ ၂ ။ ဂုဏ်သိက္ခာ ရေနှင့် စားသောက်ကုန်များကို စည်းစနစ်တကျ တန်းစီယူကြသည် ကြမ်းတမ်းသော စကား ရိုင်းစိုင်းသော အမူအရာ လုံးဝ မတွေ့ရ ။
သိမ်းထားတဲ့ လယ်မြေတွေ ပြန်ရဖို့ ဆန္ဒပြ (ရုပ်/သံ)
့က စစ်သားသုံးဦး လုယက်သတ်ဖြတ်ခံရသူ ဇာပန လိုက်ပါပို့ ဆောင်သူများ “အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပေးပါ” ဟု ဆန္ဒထုတ်ဖော် (ရုပ်/သံ)
အသတ်ခံရမှုအတွက် ဆက်လက်စစ်ဆေး (ရုပ်/သံ)
7 Day နေ့စဉ်သတင်းစာ ထုတ်ဝေ
စိုက်ဘဏ်သို့ မိုးစပါးချေးငွေ ပေးဆပ်ရာတွင် ကျပ် ၅ဝဝဝ တန် အတုများ ပါဝင်နေ
Khun Saing shared Aung Myo Min's photo.
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ချစ်ရတဲ့ အကိုကြီး ကိုမောင်မောင်ကြီးတယောက် ဧပြီလ ၂၅ ရက် မနက် ၅:၅၀ မှာ ဆုံးသွားပါပြီ...HREIB ကို စတင်ထူထောင်ကထဲက လက်တွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ နည်းပြတယောက်လဲဖြစ်၊ အကိုကြီးတယောက်လို ချစ်ခင်လေးစားခဲ့ရတဲ့သူလဲဖြစ်တဲ့အတွက် တော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်..
တချိန်က စကားပြေဘုရားတဆူ လုို့ တင်စားပြောခံရသူရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ စာလေးတစောင်...
Kyaw Kyaw Nyein Chan's photo.
၁၉၉၅ ခုနှစ် ကျနော် ဥရုဝေလတောအုပ် တနေရာမှာရှိနေတုန်း နောက်တန်းကကြေးနန်းတစောင်ရောက်လာပါတယ်။ ဆရာနုိုင်ဝင်းဆွေ ကျဆုံးရှာပြီတဲ့။(တကယ်တော့ သူဆုံးပြီး နှစ်လကျော်ကြာမှ ကြေးနန်း ရတာပါ။)တော်တော်စိတ်ထိခုိုက်ရပါတယ်။ Read more »
လက်ပံတန်းတောင် သပိတ်စခန်း ဖြိုခွဲမှုတွင် တာဝန်ရှိသူများအား ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း
Zin Yaw's status.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး (အမိန့်အမှတ်၊ ၃၆/၂၀၁၃) ၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၁၃ရက်
shared Maha Mingyi's
နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုတရားခံ ဂဋ္ဌုန်ဦးစော၏ နောက်ဆုံးနေ့များ Nyein Chan Aung
နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုတရားခံ ဂဋ္ဌုန်ဦးစော၏ နောက်ဆုံးနေ့များ - သန်းဝင်းလှိုင် http://www.mediafire.com/?ja9q5lsmt4y86aq
by Myat Thi Ha
on Sunday, April 21, 2013 at 4:34am
၂၀၁၅ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများအကြား ပိုမိုရင့် ကျက်သော၊ နားလည်မှုရှိသော၊ သူနိုင်ကိုယ်နိုင် အခင်းအကျင်းဆန်သော နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းသစ် တစ်ရပ်ကို ဦးတည်လာနိုင်မည်ဟု...
ရဲစခန်းမှာ ရန်ဖြစ်တဲ့ ရဲ နဲ့ အရပ်သားတွေကို အရေးယူ
လူမျိုးရေးပြဿနာ/ ဘာသာရေးပြဿနာ မဟုတ်ပါ
အထည်ဆိုင်က ပိတ်စတွေပေါ်မှာ စေတီပုံတွေ.ရှိတဲ.ကိစ္စရှင်းလင်း (ရုပ်/သံ)
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်၊ ၃ ဦး သေဆုံး (ရုပ်/သံ)
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်၊ ၃ ဦး သေဆုံး
အကြမ်းဖက်မှုကိစ္စ အင်ဒိုသမ္မတ ဆွေးနွေးမည်
ချေးငွေကျပ် ဘီလီယံ ၁၄၀၀ အထိ ထုတ်ချေးမည်
တက္ကသိုလ်မှ ပညာသင်ဆုများ ခေါ်ယူသွား ရန်ရှိ
၁၅၀၀ကျပ်တန် Simcard များအား ဦးရာလူ စနစ်ဖြင့် ရောင်းမည်
ပြန်လည်လက်ခံရေး ကရင်ပြည်နယ်မှာ စတင်ပြင်ဆင်
"နင်တို့က ကူညီပေးမယ်ပြောလာပြီးရင် ဒီမှာလာပြီး ချောင်လာလာထိုးတယ်""ခင်ဗျားတို့ NGO တွေက လုပ်ပေးမယ်ပြော၊ ပြီးရင် project က ဘာဖြစ်လို့ ညာဖြစ်လို့နဲ့၊ ကျွန်တော်တို့မှာ မျက်နှာအတော်ပျက်ရတယ်""NGO အချင်းချင်း စကားပြောရတာပဲ အဆင်ပြေတယ်ဗျာ၊ အစိုးရရုံးတွေ သွားပြီး ပြန်လာရင် လူဆိုတာ ဘယ်လိုကြီး ဖြစ်ဖြစ်လာမှန်းကို မသိဘူး"ဒီစကားတွေကတော့ NGO မှာ လုပ်နေသူတွေနဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းတချို့ရဲ့ တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက် အပြစ်မြင်နေကြတဲ့ စကားသံများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ မြန်မာ့ စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ ရင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းစု၏ အဆိုအရ (SOE)ဟုခေါ်သော အထူးပြု နိုင်ငံရပ်ခြားစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ အဖွဲ့မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၉ ထောင်ကျော်အကျိုးမြတ်ရရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်သန်းရွှေထံသို့ သံတော်ဦးတင်ပါသည်။ Read more »